sawehlor: HTML TAG တွေအကြောင်း
အထက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့နိုင်ရန် notepad ထဲမှာ အောက်ပါအတိုင်းရိုက်လိုက်ပါ။
<title> Example Of Header </title>
<h1> This is Header </h1>
This is normal text Page
အဲဒီ code လေးကို notepad ထဲမှာ ထည့်ရေးပါ။ ပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်ပါ။ အခုလို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ Head Tag က h1 ကနေ h6 အထိ ရှိပါတယ်။ နံပါတ်ကြီး လေလေ သေးသွားလေလေပဲ။ h6 ဆို အသေးဆုံးကို ရောက်သွားပြီ။ ကဲ လက်တွေ့စမ်းကြည့်ရအောင်။ notepad ထဲမှာ အောက်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ရိုက်ပြီး save လုပ်လိုက်။ ပြီးရင် ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် တွေ့ရပါ လိမ့်မယ်။
အခုဆို html အကြောင်းနည်းနည်း နားလည်လာ လောက်ပါပြီ။ တကယ်တော့ မခက်ပါဘူး။ ဒါကအစပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလောက်လေးနဲ့တင် စာတွေပဲပါတဲ့ page တစ်ခု ရေးလို့ ရနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်တာတွေ ရှိသေးတာပေါ့။ အခုဆက်ပြီး bold ၊ italic ၊ underline လုပ်ပုံလေးတွေ ဆက်ပြောပါမယ်။ လွယ်ပါတယ်။
HTML မှာ စာတစ်ကြောင်း အောက်ကို ဆင်းချင် ရင်တော့ <br/> ကို သုံးပါတယ်။ သူ့မှာ close tag မပါ ဘူး။ <br/> ပဲရေးရေး <br> ပဲရေးရေးရပါတယ်။
First Line<br/>Second Line<br>Third Line
Bold, ,, , Italic , Underline Tag
bold မို့လို့ ကျွန်တော်တို့တွေ <b> ကို သုံးပါ မယ်။ နောက်ပြီး italic မို့လို့ <i> ပေါ့။ ဒါဆိုရင် Underline က ဘာလဲဆိုရင် သိပြီးသားလောက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ <u> ကို သုံးပါမယ်။ အဲဒါကို notepad ထဲမှာ ဒီလိုရေးပြီး run လိုက်ရင် ရပါတယ်။
<b>This is bold</b> <br/>
<i>This is italic</i> <br/>
<u>This is underline</u> <br/>
Bold လုပ်မယ်။ နောက်ပြီး အဲဒါကို underline သားမယ်။ ဒါမှမဟုတ် italic လုပ်မယ်။ အဲလိုမျိုး လုပ်ချင် တယ်။ ရပါတယ်။ tag တွေထဲမှာ tag တွေ ထည့်လိုက် ပေါ့။ ဒီလိုထည့်လို့ ရပါတယ်။
<i><b>This is bold italic </b></i>
<u><i><b>This is bold italic </b></i></u>
အဲလိုမျိုး ရေးလို့ ရပါတယ်။ တချို့လူတွေက မေး တတ်တယ်။
<i> နဲ့စမှ ရမှာလား။ ဒီလိုတိုင်း အစဉ်တိုင်းရေးမှ ရမှာလား။ နောက်ပြီး <b><i></b></i> အဲလိုမျိုး တွေကော ပိတ်လို့ မရဘူးလား။
ဘာနဲ့ စစရပါတယ်။ အစဉ်တိုင်းမဟုတ်ပဲ <b><i> This is bold italic </i></b> လို့ရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး tag အဖွင့်တွေ အပိတ်တွေက ကြိုက်သလို ဖြစ်နေလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် structure ကျကျလေး။ ပုံစံကျကျလေး ဖြစ်နေရင် ကောင်းတာပေါ့။ နောက်မို့ဆို code ကို ပြန်ဖတ်ရခက်တာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့တွေ စာတစ်ကြောင်းဆင်းရမှာ မကြိုက်ဘူး။ Enter ခေါက်လိုက်ရုံနဲ့တင် တစ်ကြောင်း ဆင်းချင်တယ်။ အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်းကတော့ dream weaver သုံးလိုက်ခြင်းပဲ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ HTML နားလည်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
နောက်တစ်နည်းကတော့ <pre> ပါ။ ဒါပေမယ့် သူက font ပုံစံပြောင်းသွားတယ်။ အဲဒါက ကိစ္စ မရှိပါ ဘူး။ နောက်ပိုင်း font တွေ ဘယ်လို ပြောင်းရလဲဆိုတာ သိလာရင် လာပြင်လိုက်လို့ ရပါတယ်။ နောက်ပြီး <pre> မှာ သူက tab ခေါက်ထားတာတွေ အစသိပါတယ်။
<pre>Pre Tag, Now Enter
Now Tab Tab
ကျွန်တော်တို့တွေ စာတွေကို paragraph ပုံစံ ရေးချင်တယ်။ စာပိုဒ်တွေနဲ့ ရေးမယ်ပေါ့။ ဒါဆိုရင် <p> ကို သုံးလို့ရပါတယ်။ သူက အပိတ် tag မပါလည်း ရပါ တယ်။ ထည့်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။
<p>Notepad isabasic text editing program and it is most commonly used to view or edit text files. A text file isafile type typically identified by the .txt file name extension.</p>
<b> How do I change the font style and size?</b>
<p>Changes to the font style and size affect all the text in the document.<br/>
Click the Format menu, and then click Font.<br/>
Make your selections in the Font, Font style, and Size boxes.<br/>
An example of how your font will look appears under Sample.<br/>
When you are finished making font selections, click OK.<br></p>
ကျွန်တော်တို့တွေ horizonal မျဉ်းသားချင်တဲ့အခါ မှာ သုံးလို့ ရပါတယ်။ သုံးပုံသုံးနည်းကတော့ <hr> ပါပဲ။ close tag မပါပါဘူး။
<p>Notepad isabasic text editing program and it is most commonly used to view or edit text files. A text file isafile type typically identified by the .txt file name extension. </p>
<h1> How do I change the font style and size?</h1>
အထက်ပါ code ကို run လိုက်ရင် ဒီလိုမြင် ရမယ်။ အဲမှာ <hr> ထည့်ထားတဲ့နေရာက line လေးတား ထားတာကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
Posted by saw ehlor at 21:59